Banco Yakakurumbira inobudirira inovandudza yayo iPhone app | IPhone nhau
Dzimwe nguva zvinonetsa kuti unzwisise kuti mamwe makambani makuru chaizvo ane zviuru zvevashandi vane zvakadzama zvakaderera-chikamu zvikumbiro, kunyanya kana zvichishandiswa nehukuru muzana hwevatengi uye zvichikonzera mune yemushandisi ruzivo izvo zvinovhiringidza sekukanganisa. Banco Yakakurumbira yaive yakarembera kutenderedza iro boka ... kusvika kwekupedzisira kugadzirisa kwekushandisa kwayo.
1 Zvese zvinovandudza
2 Mamwe maficha
Iko kushandiswa kuri zvirinani zvirinani mumativi ese. Tinogona kuwana zvitsva mumakona ese, kutanga neakagadziriswazve interface iyo inobhejera matoni emwenje kuti ipe hukuru hukuru nzvimbo uye hutsanana kana uchishandisa iyo app. Uye zvakare, mapikicha anopindirana anosanganisirwa kuve nemamiririri ane musoro emari, uye mukana wekupinda chikamu chakavanzika chechikumbiro usingashandise zita rekushandisa nephasiwedi nekuda kwekuzadzikiswa kweTouch ID tekinoroji yekunyora kwedu zvigunwe zveminwe.
Panyaya yekushanda, tinogona kuita zviri nyore mari inoshandiswa kune mamwe maakaunzi, bvunza mafambiro ese akaitika muaccount, mabvumirano emakondirakiti kuitira kuti mari yedu itipe imwe (ine mwero parizvino) kufarira uyezve manejimendi edu epasipo nerusununguko rwakazara.
Pamusoro peiyo inonakidza runyorwa rwekuvandudza kwataurwa pamusoro apa, iyi nyowani nyowani inosanganisira mamwe mabasa senge kutsvaga matavi nemaATM zvinoenderana ne nzvimbo yedu, mukana wekugadzirisa mashandisiro acho mune zvimwe zvinhu uye zvinotibatsirawo kuti tibate bhangi kana tichida kutanga kutaurirana nerubatsiro rwayo kana neboka renzvimbo dzekudyidzana.
Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti mune iyi vhezheni kune zvakare mutsauko pakati pe iPhone ne iPad, zvinoreva kuti iyo vhezheni ye Apple piritsi haina kuganhurirwa pakuwedzeredzwa uye yakagadzirirwa nehukuru hweiyo mukoma we iPhone mukuru mupfungwa. Zvinotaridza sekuonekwa kuti makambani makuru ari kutanga kuona kuti yemhando yekushandisa inopa zvisingaverengeki mabhenefiti uye kunyangwe vatengi vatsva nekutenda kuongororo muApp Store uye neshoko remuromo, saka zvichave zvinonakidza kuona kana mamwe mabhangi achinyoresa kuvandudzwa kweapp mavo munguva pfupi iri kutevera.
Nenzira, yambiro yekupedzisira: iyi application haifanire kuvhiringidzwa neiya inonzi "Banco Yakakurumbira", ichiri kupihwa mu App Store nebhangi uye kuti haisi yemazuva ano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Banco Yakakurumbira inobudirira inovandudza iyo iPhone app